समाचार – Page 694 – Sudarshan Khabar
असार २ गते घरकै भान्सा कोठामा मृ’त भेटिएकी हेटौंडा उपमहानगरपालिका– ४ गर्दोही सूर्यचोककी सुस्मिता थापाको ह’त्या’मा ससुरा र नन्दको संलग्नता देखिएको छ । एकसाता लामो अनुसन्धानपछि ह’त्या’मा सुस्मिताका ससुरा प्रकाश थापा र नन्द सीताको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिए । त्यस दिन खाना खाने समयमा विवाद भएको […]
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरको कालागाउँस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत पाँचजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश अस्पतालको ल्याब र एक्सरे विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा.केएन पौडेलका अनुसार प्रदेश अस्पतालको ल्याबमा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्टसहित चारजना र एकजना एक्सरेमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ […]
सोनमको जवाफ–‘म मेरो पिताको कारण बलिउडमा छु’
बलिउड नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि बलिउडमा परिवारवादको मुद्दा चर्किएको छ । अहिले बलिउडकर्मीका सन्तानलाई सामाजिक संजालमा अश्लिल म्यासेज आउन थालेको छ । उनीहरुको चर्को ट्रोल पनि भैरहेको छ । नायिका सोनाक्षी सिन्हाले यही कारण देखाउँदै ट्विटरबाट बिदा लिने निर्णय गरिसकेकी छिन् । बलिउडमा परिवारवादको चर्को मुद्दा उठेपछि नायिका सोनम कपुरले यो बिषयमा मुख खोलेकी […]
सुर्खेत । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयले पठनपाठन सुरु गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सरकारले विद्यालयलाई तत्काल खुला नगर्ने क्षेत्रमा राखेको छ । तर आफूहरूले सामाजिक दुरी कायम गरेर पठन पाठन सुरु गरेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले जानकारी दिए । विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिएर पढाइ सुरु गरिएको प्रधानाध्यापक थापाको […]
कैलाली । गत चैत्र ११ गतेदेखि भारतबाट आएका नेपालीको उद्धारमा सक्रिय थिए कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका– १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट । सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपालीको उद्धार र उनीहरुको व्यवस्थापनमा खटिएका भट्टलाई जेठ २४ गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भयो । भट्ट गोदावरी नगरपालिकाका पहिलो संक्रमित हुन् । त्यसयता शनिबार सम्म २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ […]
काठमाडौं । विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउनको समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले आइतबार संयुक्त रुपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको हो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा […]
नेपालगञ्जमा भेटियो भगवान शंकरको मूर्ति
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ गगनगञ्जमा चाँदी जस्तो टल्किने मूर्ति भेटिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पानी निकासाका लागि नाली खनेको ठाउँमा चाँदी जस्तो टल्किने शंकर भगवानको मूर्ति भेटिएको हो । नाली निकासाका लागि डोजरले खनेको ठाउँमा स्थानीय ४ जना बालकले खेल्ने क्रममा उक्त मूर्ति फेला पारेका हुन् । सुरुमा टल्किएको केही बस्तु जस्तो देखिएपछि कोट्याएर […]
क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका एक युवकको मृ’त्यु
सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका एक जना युवकको मृ’त्यु भएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका ५ का ३५ वर्षीय युवकको आइतबार बिहान मृ’त्यु भएको हो । जेठ १६ गते भारतको हिमाचलबाट फर्किएका उनी छिन्चुको शारदा माध्यामिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर जेठ २९ गते घर फर्किएका थिए । क्वारेन्टाइनमा आरडीटी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ […]
दानवखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल भाँचियाे, इन्जिनियर घाईते
असार । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका छपियामा पर्ने दानवखोला पार गर्न निर्माण गरिएको मोटरेबल पुल निर्माणकै क्रममा भाचिएकाे छ । पुल भाँचिँदा इन्जिनियर महेश्वर लम्साल घाइते भएका छन् । उनको हात भाँचिएको र उपचारको क्रममा लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा रहेको सडक डिभिजन बुटवलले जानकारी दिएको छ । दयानगर-छपिया जोड्ने पुललाई निलगिरी नेशनल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो […]
कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएपछि आइसोलेसनबाटै संक्रमित भागे
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको भित्री मधेस परशुरामस्थित आइसोलेसनमा रहेका ८ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भागेका छन्। परशुराम नगरपालिका–१२ मा रहेको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयको आइसोलेसनमा रहेका ८ संक्रमित शनिबार भागेका हुन्। वडा नं. ५ मा रहेको क्वारेन्टानमा रहेका उनीहरूमा शुक्रबार कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्‍ने भनेर सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयमा ल्याइएको थियो। […]
Previous 1 … 693 694 695 … 778 Next